Mana Oromoo Swiss: Statement of announcing the formation of the Alliance for freedom and Democracy
Statement of announcing the formation of the Alliance for freedom and Democracy
Guyyaa har’aatti (May 22 2006) Gartuwwan mormitoota Mootummaa Ethiopia hedduun wal ta’uun Qindoomina bilisummaa fi Democracy jedhu waliin ijaaruu isaanii ibsatanii jiru.
Jarmoleen kun kan akka CUDP EPPF; ONLF Maqaa ABOtiin kan of waamu Shanee gumii, SLF UEDF fi kan kana fafakkaatan yoo ta’ kora kana kan qindeesse Maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin shanee gumii ta’uun isaa hubatamee jira.
Haala Kana ilaalchisee gaffii fi bebii Raadioon Voice of Oromia jedhumu nama Muluu Hiikaa jedhaman waliin gaafiif deebii taasisanii jiru.
Gaaffiin jabduu fi gaaffii saba Oromoo hundaa kan ta’uu malu; Raadiyoon kun isaan gaafate tokko kan akkas jedhu ture:-
Gartuuwwaan kaayyoon wal-hinfakkaanne keessayyuu dhaaba Amaaree kan akka CDU gaaffii Sabaa fi Sab-lammii hin fudhanne waliin attamiin wal-ta’uun danda’ame? Kan jedhu yoo ta’u.
Obbo Muluun :-kun tooftaa dha. Jechuun, sidaamnni nu caalu haxeedha kan jedhan yoo jeraatan illee; Oromoon bakka kaleessa jira mit. Wal-ta’issa kana kan gooneef tooftaadhaaf jechuu oduu ilmaan oromoo dhiigsu dubbatanii jiru.
Gaaffiin kan biraa dhihaateef:- Jaarmota Oromoo walaba, bilisummaa Oromiyaatti amanan waliin wal-ta’insa utuu hin uumin dhaaba halagaa waliin wal-ta’uun attami innii? Kan jedhu ture.
Obbo Muluun yoo deebisan:- Inni kun hatattama waan ta’eef tarkaanfii kana fudhannee jira. Kan Ororootaas ittuma hojjachaa jirra jechuudhaan dubbatanii jiru.
Walta’insa ilmaan Oromootaa irra caalaan wal-ta’insa halgaan gochuu qabsoo Oromoo akka shaffisuuf akka cimsutti ilaaluu fi tooftaaf jechuun Kaayyoo ganamaa Adda Bilisummaa Oromoo ganuun ilmaan Oromoo dheekamsiisuu irra darbee; Seenaa Goobanaa Daacee ammas akka irra deebi’amuu danda’u hubachiisa jedhu namoonni adda addaa.
Gaaffiif deebii kanaan boodas sirba Wallisticha Oromoo Elemoo Alii :-.
Seenaa Oromoo keessatti,
Gabrummaa irraa jalqabee hanga ammaattii;
hinjiru kan akka Goobanaa jibamaan,
Hojii isaa hundaatti cubbamaan.
Goobana daacee Ilmaan Oromoo irratti Nafxanyaa fe’ee..... kan jedhu
gaaffiif deebii kanaan kan wal-qabate; Raadiyoon kun dhageeffatoota isaa afeeree jera.
Egaa har’as keessa deebinee yoo kaayyoo Oromitichaa ganuun ilmaan Habashootaa keessattuu Leellistoota Minilikii fi Tewedroosiin wal-ta’uun qanessaa fi eenyummaa Shanee ifatti waan mul’ise ta’ee jira jedhu Ormoonni hadduun.
Kadhaa fi gorsa Maanguddoota, Beektotaa fi Oromoota mara tuffachuun Dhaabbota Oromootaan wal-ta'uu diduun; halagaaf caalaa kabaja kennuun; halagaa akka beekaa fi humnaatti ilaaluun, diinaan hidhachuuf, diinatti galuun; har’a Uummata Oromoo qaanessuu fi xiqqeessuu dha.
Diinna haqaa qabataniin, kaayyoo dhugatiin, yookaan hirreen mo’uu malee Kaayyoo ofii ganuun itti galuun booji’amuun mo’amuu dha malee; tooftaa ta’uu hin danda’u.
Halabaa Minilik jatatti wal-ta’uu fi waayee tokkuummaa ololuun Uummata Oroomoo qabsoo irraa deebisuuf malee; qabsoo tumsuuf ta’uu tasa hin danda’u.
Biyya keessatti ilmaan Oromootaa har’a Halaabaa Habashaa buusanii ciruun Halaabaa Bilisummaa isaanii Halaabaa ABO yoo ol-baasatan lubbuu isaanii wareeganii fi wareegaa jiran kanatti; Shaneen leellistoota Minilikiin wal-taane jechuun, kaayyoo geddarannee dhaabadhaa! jechuuf yaaluun, eenyummaa namoota shanee keessatti of ijaaranii Uummata Orootiif mul’isa jedhu ilmaan Ormoo hedduun.
Ilmaan Orootaa qabsoo kanaaf Abbaa isaanii, Haadha isaanii, Obboleessa isaanii, Obboleettii isaanii dhabanii fi Oromoota itt gidiramnii fi gidiraamaa jiranti gochaan Gumii Shanee kun hagam akka dhaga’amu, hagam Shaneen dantaaf dhiiga ilmaan Oromootaan daldalu, tokkoon tokkoon Oromootii dhiisuu feena.
Ilmaan Oromoo Of irratti malee halagaa irratti irkachuun keessattuu namoota Oromoo saba jechuullee lagatan ’’Gosa’’ jechuun gadi xiqqeessanii waamanin bilusoomuuf yaaluun soba.
Nafxanyaa ofii illee kuftee jirtu Oromoo bilsa baasuu dandeessi jechuuf Shaneen itti galuuf yoo of gurgure, Ilmaan Oromootaa bakka bu’uun utuu hin ta’in dhuunfaa isaatiin shaneen ta’uun mirga isaaniiti.
Oromoyaan Ni Bilisoomti!
posted by Mana Oromoo Swiss @ 2:46 PM 0 comments
Ethiopia, Zimbabwe are Africa's worst offenders in...
Series of explosions in the Ethiopia’s capital Add...
Dhukaan Boonbii wal-irraa hincinne Uummata Oromoo ...